လူနှစ် ဦး ခွဲခြားရန်ဆုတောင်းခြင်း San Alejo rapido သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ရေးရာတည်ငြိမ်မှုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏သုခချမ်းသာကိုထိခိုက်စေသည့်အခြေအနေများတွင်အကျုံးဝင်သည်။
အများဆုံးအသုံးပြုသောဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားလက်ရှိမိတ်ဖက်မှခွဲထုတ်ခြင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ရှိခဲ့သည့်ဆက်နွယ်မှုကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားစွန့်ခွာခြင်းကိုတားဆီးရန်ဖြစ်သည်။
1 လူနှစ် ဦး ကိုခွဲခွာရန်ဆုတောင်းခြင်းသည်အမြဲတမ်းအလုပ်ဖြစ်သလား။
1.1 လူနှစ် ဦး ကိုတိတိကျကျခွဲခြားရန် San Alejo သို့ဆုတောင်းပါ
1.3 လူနှစ် ဦး အားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မုန်းတီးရန်ဆုတောင်းပါ
2 လူနှစ် ဦး ကိုတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ခွဲခွဲရန်ဆုတောင်းပဌနာပြုနိုင်ပါသလား။
လူနှစ် ဦး ကိုခွဲခွာရန်ဆုတောင်းခြင်းသည်အမြဲတမ်းအလုပ်ဖြစ်သလား။
ဤလူနှစ် ဦး ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မမှန်ပါက၊ ဆုတောင်းပဌနာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်.
လူနှစ် ဦး ကိုတိတိကျကျခွဲခြားရန် San Alejo သို့ဆုတောင်းပါ
သခင်ရွေးချယ်သောသူများကိုဝန်းရံသောအဘ၊ အရာခပ်သိမ်းကို (ပထမပုဂ္ဂိုလ်ဟုခေါ်သည်) မှ (အောက်ပါနာမည်ဖြင့်ခေါ်သည်) ထွက်ခွာရန် (စိန့်အလီဂျို) သို့ (နာမည်သည်ထပ်ခါတလဲလဲ) ရန်။
သူကကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးပျက်စီးမှုကိုမယုံနိုင်အောင်သူ၏ကျမ်းပိုဒ်နှင့်သူ၏အသက်တာ၏။ San Alejo ကိုငါတောင်းပန်ပါတယ်
သူတို့အတူတကွဖြစ်ရန်မရောက်ရှိနိုင်, တစ် ဦး ပျော်ပွဲစားစားပွဲမှာမဟုတ်သလိုငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်ကုလားထိုင်၌လည်း, သူတို့ကအတူတကွလက်လှမ်းမမီနိုင်အောင်, တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားနှင့်အတူပူးပေါင်းရန်မရကြဘူး, ဒါမှမဟုတ်စာနာဖို့ Lounge ထဲမှာ, ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာ bounce, ရွံရှာခြင်းနှင့်ရွံစရာမလိုဘဲ, ငါသည်သင်တို့အားမေးတယ်။
သူတို့ယုံကြည်စိတ်ချဖို့တွဲမရနိုင်သည်ကို။ San Alejo, သူတို့ကိုနိဂုံးချုပ်ထား။
ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော San Alejo၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုမှုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေးရန်၊ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ယခုသူပြန်လာရန်နှင့်သူမိသားစုနှင့်အတူအိမ်ပြန်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားတောင်းပန်ပါ၏။
စံပြဆန်သောအလီဂျို၊ ကျွန်ုပ်၏ကြားနာမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏မိသားစုအားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရန်ကျွန်ုပ်ကိုခွင့်ပြုပါကသင်၏ဆုတောင်းချက်ကိုဖြန့်ဝေရန်ကျွန်ုပ်၏စကားလုံးကိုကျွန်ုပ်ပြောပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနှစ် ဦး ကိုအတူတကွမတွေ့နိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်များရှိသော်လည်း၎င်းအားလုံခြုံစွာနှင့်ထိထိရောက်ရောက်အောင်မြင်စေရန်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆိုခွဲခြားစေလိုသည့်ကိစ္စများရှိသည်။ San Alejo ကိုဆုတောင်း.
၎င်းသည်အလွန်တိကျသောဆုတောင်းပဌနာဖြစ်ပြီးလူနှစ် ဦး သည်သည်းမခံခြင်း၊ အခြားသူများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းမပြုလိုခြင်း၊ မောင်နှံစုံရှိနေခြင်းကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း၊ ပြန်လည်တွေ့ဆုံရန်ဆန္ဒမရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ တဒင်္ဂမှနောက်တစ်ခုသို့သူတို့သည်ခွဲခွာခြင်းသို့ရောက်သောအထိမိမိတို့ကိုယ်ကိုရွံမုန်းကြသည်။
အိုး၊ Santa Muerte မင်းဆီကိုလာပါ။ မင်းကိုကူညီဖို့တောင်းပန်ပါတယ်။ ဘဝမှာစိတ်ပျက်မိတယ်။ ငါနဲ့ခွဲနေတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိတဲ့သူကိုအခြားမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ခွဲခွာခွင့်ပြုဖို့ငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးနှစ်တွေကိုငါပေးခဲ့တယ်။ သူကကျွန်တော့်အိမ်ထောင်ရေးကို (သူရဲ့နာမည်) ကနေဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ်။
Santa Muerte, (ထိုလူ၏အမည်) ကသူ့ကိုမုန်းတီးပြီးသူ့ကိုမယုံကြည်ပါစေနှင့်၊ သူသည်သူကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုသဘောပေါက်သည်၊ သူလိုချင်သမျှသည်သူ၏ငွေနှင့်ပျော်စရာဖြစ်သည်။ သူနှင့်အတူအကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုသူနှင့်ခွဲခြားစေသည့်အရာကြောင့်အခြားမျက်ရည်များကြောင့်ကျွန်ုပ်မျက်ရည်ကျခဲ့ရသည်။
အိုးဖြူမိန်းကလေးကသင်၏အစွမ်းအစကို အသုံးပြု၍ အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး အားဂိမ်းထဲမှထွက်ခွါသွားစေပါသည်။ Santa Muerte ကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏ (ထိုလူ၏အမည်) ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်ကိုသိုးသငယ်ငယ်လေးအဖြစ်နူးညံ့သိမ်မွေ့စေလိုသည်။ နောက်မိန်းမတစ်ယောက်ကငါ့ကိုခြေထောက်ပေါ်အချိုပွဲလုပ်ပြီးခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းတယ်။
အိုးစန်တာ Muerte က (ထိုလူ၏အမည်) ကျွန်ုပ်၏သနားခြင်းကရုဏာကိုတောင်းစားနေခြင်းကိုပြန်လည်တွေးတောဆင်ခြင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထပ်တလဲလဲစဉ်းစားမိစေရန် (ထိုလူ၏အမည်) မခံနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါ။ ။
လူနှစ် ဦး (ချစ်သူများ) ကိုခွဲခွာရန်ဤဆုတောင်းခြင်းသည်သူ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကြောင့်ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူများစွာကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
လူနှစ် ဦး အားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မုန်းတီးရန်ဆုတောင်းပါ
Saint Cyprian, သြဇာအာဏာအရှိဆုံးသူ၊ မင်းရဲ့အကူအညီလိုတယ်၊ မင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ငါတို့နှစ် ဦး နှစ်ဖက်နီးကပ်စွာနေထိုင်နိုင်အောင်ဖန်တီးထားတယ်၊ ငါ ၁ မှ ၂ သို့ပြောင်းရွှေ့ပါရန်သင့်အားတောင်းဆိုပါ၊ မင်းရဲ့စွမ်းအားတွေလိုအပ်ပါတယ် ဤလူနှစ် ဦး ကိုခွဲခြားရန်အသုံးပြုရမည်။
မမြင်ချင်ဘူး၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဝေးဝေးနေပါ။ ငါဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူအောင်နေထိုင်ဖို့မွေးဖွားလာတဲ့လူတွေကသူတို့အတူတူမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။
အိုးခွန်အားကြီးသောစိန့် Cyprian, သင်သည်တန်ခိုးအရှိဆုံး၏တန်ခိုးကြီးသည်, ငါသည်သင်တို့၏စွမ်းအားကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားတောင်းဆို, ဤလူများခွဲခြားနိုင်အောင်သူတို့အတူတကွပေါ်မသွားနိုင်, သူတို့တော့ဘူးမခံစားရပါဘူး, ငါသူတို့ကွဲကွာခံရဖို့လိုအပ်တယ်သိ, ဒီစုံတွဲသည်မဟုတ် ပျော်ရွှင်မှု၏သာဓက။
မပျော်ရွှင်သောသူများကိုခွဲခြားရန်ဤဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ပို၍ ပျော်ရွှင်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ ဤဆုတောင်းချက်သည်မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမုန်းတရားကိုလောင်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်သူများဖြစ်ပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်ပင်ဖြစ်စေ၊ ဘာကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်သောလူများဖြစ်သည်။
အခုဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လုပ်ထားတယ် အပျက်သဘောဆောင်သောစွမ်းအင်စီးဆင်းသည့်နေရာများတွင်ရန်ငြိုးကိုဖန်တီးပါ လူကောင်းတစ် ဦး ကိုညစ်ညမ်းစေခြင်း
လူနှစ် ဦး အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးမုန်းတီးရန်ဤဆုတောင်းချက်သည်မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး ၏ကုမ္ပဏီတွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောအရာသည် ပို၍ ကောင်းသည်။
သူတို့သည်ဤအရာကိုသူတို့၏ ၀ ိညာဉ်ထဲသို့နက်ရှိုင်းစွာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ယုံကြည်၍ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တောင်းသောအရာကိုရယူကြပါစို့။
လူနှစ် ဦး ကိုတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ခွဲခွဲရန်ဆုတောင်းပဌနာပြုနိုင်ပါသလား။
ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်လူနှစ် ဦး အားခွဲခြားရန်နှင့်အမှန်တကယ်လိုအပ်သောကိစ္စရပ်များတွင်လျင်မြန်စွာခွဲခွာခြင်းကိုသာပြုလုပ်ပါ။